Email Insights: Maitiro Ekutsvagisa Yako Email Makwikwi | Martech Zone
Email Insights: Maitiro Ekutsvagisa Yako Email Kukwikwidza
China, July 10, 2014 Douglas Karr
Vanokwikwidza vanotumira maemail avo riini? Iwo maemail anotaridzika sei? Ndedzipi mhando dzemitsara yavanoshandisa? Ndeapi tsamba eemail anozivikanwa kwazvo muindasitiri yako? Aya ndiwo marudzi emibvunzo inogona kupindurwa uchishandisa Email Insights, chishandiso chevatengesi veemail kuti vatsvage iyo tsamba dzinozivikanwa kwazvo dzeemail uye / kana kukwikwidza kwako.
Email Insights yatove nenhau dzinozivikanwa kwazvo dzakarongedzwa neindasitiri kuti ugone kuwana nekudzokorora matsamba aunoshuvira kutsvagisa:
Paunenge iwe ukadzikisira pasi indasitiri kana kunyangwe anotumira, iwe unogona kufanoona iyo chaiyo email.
Chinhu chakanakisa ndechekuti iwe unogona kutarisa yemusoro wenyaya izwi gore remazwi avo anonyanya kushandiswa mumusoro wenyaya yavo, yavo yazvino misoro yenyaya, uye yavo refu uye ipfupi yenyaya mitsara.
Zvichida chinonyanya kunakidza cheEndaneti Insights ndechekuti ivo vanoteedzerawo kuwanda kwekutumira kunyoreswa, zuva raanotumirwa uye kunyangwe nguva yaanotumirwa. Izvi zvinogona kupa mutengesi weemail nezvose zvavanoda kuti vagadzire purogiramu yekushambadzira yeemail, kugadzirisa nguva yekutumira, uye kukudziridza mutambo wemakwikwi wenyaya.
Kushandisa chishandiso chavo kunogona kupa kumwe kukurudzira kune yako inotevera email dhizaini - tarisa kunze Email Insights - vane 30 zuva rekuyedzwa uye yakatsetseka mutengo unodhura wekutangisa kumusoro!
Tags: email makwikwiemail kukwikwidza kutsvagisaemail dhizainiemail dhizaini mapataniemail Insightsemail nyaya mitsaratsamba dzinozivikanwa kwazvo dzeemailnewsletter mienzanisotsamba dzetsamba
Maitiro Ekuita Kuti Zvemukati Zvive Zvigovane
Jul 10, 2014 pa 9: 09 AM
Great post Douglas! Ndatenda nekugovana!